Detention (2019) | MM Movie Store
၂၀၁၉နှဈကုနျပိုငျးလောကျကထှကျထားတဲ့ Psychological Horror film လေးတဈခုနဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ ၊ဇာတျလမျးလေးက၁၉၆၂ခုနှဈအတှငျး ထိုငျဝမျစဈအစိုးရလကျအောကျကရြောကျတဲ့အခြိနျ…အစိုးရကိုပုနျကနျဖို့မပွောနဲ့ စကားတောငျလှတျလှတျလပျလပျမပွောရဲလောကျအောငျ အုပျစုဖှဲ့တာတှတေားမွဈ ၊
စဈအုပျခြုပျရေးကိုဖီဆနျမယျ့ သဘောသဘာဝတှပေါတဲ့စာအုပျစာပတှေေ ၊ လူငယျတှကေိုဆှဲဆောငျတဲ့စာအုပျစာပတှေေ ဖတျခွငျးရေးခွငျးကိုလဲ သဒေဏျပေးတဲ့အထိကို တငျးတငျးကွပျကွပျတားမွဈထားတဲ့အခြိနျ….လှတျလပျရေးမွတျနိုးတဲ့ကြောငျးဆရာလေး ကနျြးမငျဟှကေ တိတျတဆိတျစာအုပျအသငျးတဈခုဖှဲ့စညျးထားခဲ့တယျ…
တဈနမှေ့ာ စာအုပျအသငျးထဲကကြောငျးသားဝကြေုံးထငျနဲ့ စီနီယာအတနျးကကြောငျးသူဖနျရရှေ့ငျးတို့ သူတို့ကြောငျးကွီးထဲပိတျမိရာကသူတို့တှခေဲ့ရတဲ့ထိတျလနျ့မှုတှနေဲ့ ပွောငျးလဲသှားတဲ့သူတို့ရဲ့ကံတရား….သူတို့တငျမဟုတျပဲစာအုပျအသငျးတဈခုလုံးရဲ့ကံတရား…ဘယျသူ့ကွောငျ့စတငျခဲ့ပွီး …ဘယျမှာအဆုံးသတျမှာလဲ…
Psychological Horrorဆိုတဲ့အတိုငျး သရဲတှခေညျြးပွူးပွူးပွဲပွဲခွောကျတာမဟုတျပဲ ၊ဘာတှလေဲ ဘာတှလေဲဆိုတဲ့ ? မေးခှနျးပေါငျးမြားစှာနဲ့ ဇဝဇေဝါ အလနျ့တကွားလေးကွညျ့ရမယျ့ကားလေးမို့လို့ရသအသဈတဈခုခံစားရစဖေို့မြှျောလငျ့ရငျး တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ။
၂၀၁၉နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကထွက်ထားတဲ့ Psychological Horror film လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ၊ဇာတ်လမ်းလေးက၁၉၆၂ခုနှစ်အတွင်း ထိုင်ဝမ်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကျရောက်တဲ့အချိန်…အစိုးရကိုပုန်ကန်ဖို့မပြောနဲ့ စကားတောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မပြောရဲလောက်အောင် အုပ်စုဖွဲ့တာတွေတားမြစ် ၊
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဖီဆန်မယ့် သဘောသဘာဝတွေပါတဲ့စာအုပ်စာပေတွေ ၊ လူငယ်တွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့စာအုပ်စာပေတွေ ဖတ်ခြင်းရေးခြင်းကိုလဲ သေဒဏ်ပေးတဲ့အထိကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားတဲ့အချိန်….လွတ်လပ်ရေးမြတ်နိုးတဲ့ကျောင်းဆရာလေး ကျန်းမင်ဟွေက တိတ်တဆိတ်စာအုပ်အသင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းထားခဲ့တယ်…
တစ်နေ့မှာ စာအုပ်အသင်းထဲကကျောင်းသားဝေကျုံးထင်နဲ့ စီနီယာအတန်းကကျောင်းသူဖန်ရေ့ရှင်းတို့ သူတို့ကျောင်းကြီးထဲပိတ်မိရာကသူတို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတို့ရဲ့ကံတရား….သူတို့တင်မဟုတ်ပဲစာအုပ်အသင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကံတရား…ဘယ်သူ့ကြောင့်စတင်ခဲ့ပြီး …ဘယ်မှာအဆုံးသတ်မှာလဲ…
Psychological Horrorဆိုတဲ့အတိုင်း သရဲတွေချည်းပြူးပြူးပြဲပြဲခြောက်တာမဟုတ်ပဲ ၊ဘာတွေလဲ ဘာတွေလဲဆိုတဲ့ ? မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ဇဝေဇဝါ အလန့်တကြားလေးကြည့်ရမယ့်ကားလေးမို့လို့ရသအသစ်တစ်ခုခံစားရစေဖို့မျှော်လင့်ရင်း တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
GYM နညျးပွ အကိတျမမ – Link 2